The Founder of Diabolism – MMANIME
Created byKe Xiong, Mo Xiang Tong Xiu
StarringBian Jiang, Chenzhang Taikang, Guo Haoran, Jin Xian, Shao Tong, Su Shangqing, Yang Tianxiang, Zhang Jie
Synopsis of The Founder of Diabolism
သိတဲသူရှိသလိုမသိတဲသူလည်းရှိမှာပါ… အဓိကဇာတ်ကောင် ဝေ့ဝူရှန်း က သိုင်းလောက မှာ မှော်နက်ကျင့်စဉ်ကျင့်သူ အဖြစ် လူတိုင်းဖိတ်ဖိတ်တုန်အောင်ကြောက်ရသူ (ထိုစာရင်းထဲ၌ လန့်ကျန်မပါ)…. နေမင်းဖြိုခွင်းစစ်ဆင်ရေးဖြစ်တဲ့ ဝမ်မျိုးနွယ်တွေ တိုက်ထုတ်ရမှာ သူအစွမ်းက လောကကိုတုန်လှူပ်စေခဲ့တယ်… ဒါပေမဲ့.. တစ်နေမှာ ဝေ့ရင်းဟာ အစအနမရှိ သေဆုံးသွားခဲ့တယ် ဘယ်သူများသူကိုသတ်နိုင်ခဲ့တာလဲ… မေးခွန်တွေများခဲ့တယ်..
တချို့က ကြတော့ ညီ ဖြစ်သူ ကျန်းချန် လက်ချက်လို့ ဆိုကြတယ်….. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သေသူတစ်ယောက်က ပြန်မလာနိုင်တော့ဘူး အကုန်ပြီးဆုံးသွားပြီပေါ့..လို့ထင်ကြပေမဲ့..
တစ်ယောက်ယောက်က ခန္ဓာစတေးပြီး ဝေ့ဝူရှန်းအား ဖိတ်ခေါ်သောအခါ……. သူသေဆုံးမှူရဲ့နောက်ကွက်ဟာ ဘာတွေများဖြစ်ခဲသလဲ..
….16နှစ်တာ​ကာလပတ်လုံးတစ်စုံတစ်ယောက်ကလည်းသေဆုံးသွားတဲ့ ဝေ့ဝူရှန်းကိုမဖြစ်နိုင်မှန်သိလျက်နဲ့စောင့်နေခဲ့တယ်…. ဒါကဘယ်သူများလဲ ဘာ့အတွက်များဖြစ်မလဲ
Anime အနေနဲ့ကတော့ လုံးဝ Drama ပါ ဝေ့ဝူရှန်းသူမိသားစု သူဂိုဏ်း အပေါ်ပေးဆပ်ခဲ့တာတွေ တွေ့ရမှာပါ တရုတ်ပြည်သတ်မှတ်ချက်အရ anime မှာ bl ထည့်ခွင့်မရလို့ပါပဲ Bl မကြိုက်တဲ့ သူတွေက anime ကိုကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်
သိတဲသူရှိသလိုမသိတဲသူလညျးရှိမှာပါ… အဓိကဇာတျကောငျ ဝဝေူ့ရှနျး က သိုငျးလောက မှာ မှျောနကျကငျြ့စဉျကငျြ့သူ အဖွဈ လူတိုငျးဖိတျဖိတျတုနျအောငျကွောကျရသူ (ထိုစာရငျးထဲ၌ လနျ့ကနျြမပါ)…. နမေငျးဖွိုခှငျးစဈဆငျရေးဖွဈတဲ့ ဝမျမြိုးနှယျတှေ တိုကျထုတျရမှာ သူအစှမျးက လောကကိုတုနျလှူပျစခေဲ့တယျ… ဒါပမေဲ့.. တဈနမှော ဝရေ့ငျးဟာ အစအနမရှိ သဆေုံးသှားခဲ့တယျ ဘယျသူမြားသူကိုသတျနိုငျခဲ့တာလဲ… မေးခှနျတှမြေားခဲ့တယျ..
တခြို့က ကွတော့ ညီ ဖွဈသူ ကနျြးခနျြ လကျခကျြလို့ ဆိုကွတယျ….. ဘာပဲဖွဈဖွဈ သသေူတဈယောကျက ပွနျမလာနိုငျတော့ဘူး အကုနျပွီးဆုံးသှားပွီပေါ့..လို့ထငျကွပမေဲ့..
တဈယောကျယောကျက ခန်ဓာစတေးပွီး ဝဝေူ့ရှနျးအား ဖိတျချေါသောအခါ……. သူသဆေုံးမှူရဲ့နောကျကှကျဟာ ဘာတှမြေားဖွဈခဲသလဲ..
….16နှဈတာကာလပတျလုံးတဈစုံတဈယောကျကလညျးသဆေုံးသှားတဲ့ ဝဝေူ့ရှနျးကိုမဖွဈနိုငျမှနျသိလကျြနဲ့စောငျ့နခေဲ့တယျ…. ဒါကဘယျသူမြားလဲ ဘာ့အတှကျမြားဖွဈမလဲ
Anime အနနေဲ့ကတော့ လုံးဝ Drama ပါ ဝဝေူ့ရှနျးသူမိသားစု သူဂိုဏျး အပျေါပေးဆပျခဲ့တာတှေ တှရေ့မှာပါ တရုတျပွညျသတျမှတျခကျြအရ anime မှာ bl ထညျ့ခှငျ့မရလို့ပါပဲ Bl မကွိုကျတဲ့ သူတှကေ anime ကိုကွညျ့ဖို့ တိုကျတှနျးပါတယျ
⚠️အခွေထုတ်ခွင့်မပေးပါ/ reports များမပေးပါ သိမ်းထားခြင်းလို့လိုချင်သူများ Yuki ဆီ data ကို page မှာတဆင့်လာတောင်းနိုင်ပါတယ်… ငွေကြေးဖြင့်ရောင်းဝယ်ခြင်းကိုလည်း ဘာသာပြန် အဖွဲ့အနေနဲ့ ခွင့်မပြုပါ ⚠️
⚠️အခှထေုတျခှငျ့မပေးပါ/ reports မြားမပေးပါ သိမျးထားခွငျးလို့လိုခငျြသူမြား Yuki ဆီ data ကို page မှာတဆငျ့လာတောငျးနိုငျပါတယျ… ငှကွေေးဖွငျ့ရောငျးဝယျခွငျးကိုလညျး ဘာသာပွနျ အဖှဲ့အနနေဲ့ ခှငျ့မပွုပါ ⚠️
Translator – lilybelle – Meaning Checker – Ming /Khamlao /Izuna
Ending Song Translator – Mei i xing
Encoder /Editor – Yuki
Airs OnTencent Video
Firt air date2018-07-09